महँगो भाँडामा बेलायतबाट १४६ अलपत्र नेपाली स्वदेश प्रस्थान, अर्को उडान २६ जुन शुक्रबार - Himalayamail.com
कोरोना टेस्ट र सामाजिक दुरी खोइ?
लण्डन । कोरोना ( कोभिड-१९) महामारीका कारण बेलायतमा बिगत ३ महिना भन्दा बढी समयदेखि अलपत्रमा परेका १४६ जना नेपालीहरु बुधबार स्वदेश फर्केका छन्। लण्डनको ग्याटविक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइट मार्फत उनीहरु नेपाल फर्केका हुन्।
लण्डनस्थित नेपाली राजदुताबासका उप नियोग प्रमुख तथा प्रबक्ता शरदराज आरनका अनुसार उनीहरु कुवेत हुँदै नेपाल पुगनेछन्। उडानको बीचमा विमान कुवेतमा डेढ घण्टा रोकिएपनि यात्रुहरु बाहिर निस्कन भने पाउने छैनन्। यात्रुहरु अर्को दिन नेपालको समय अनुसार बिहान करिब ९ बजे काठमाडौं अवतरण हुने अनुमान छ।
नेपाल सरकारले बेलायतबाट दुई उडानमा यहाँ अड्किएका नेपालीहरुको उद्धार गर्दैछ। पहिलो उडानमा आज १५८ जनालाई नेपाल पठाउने भनिए पनि विमानस्थलमा १४६ जना मात्र उडेका थिए। दोस्रो उडान शुक्रबार सोहि एयरलाइन्सबाट ग्याटविक विमानस्थलबाट नै उड्ने छ । दुताबासका प्रवक्ता आरनले दोस्रो फ्लाइटका लागि नेपाल जाने नेपालीहरुलाई हवाई टिकट यथाशिघ्र काट्न अनुरोध गरेका छन्।
जजिरा एअरलाइन्सको नेपाल एजेन्ट मार्फत एकतर्फी टिकटको लागि नेपाल सरकारले नै तोकेको ९ सय २० पाउण्ड मंहगो भएको भन्दै बिमानस्थलमा समेत कतिपय यात्रुहरुले गुनासो गरेका थिए। यसरि फर्किनेमा कोरोना महामारीका बेला रोजगारी गुमाएका, भिसा सकिएका, अलपत्र विद्यार्थी, जाँच दिन आएका डाक्टर, तालिम लिन आएका सैनिक, कर्मचारी लगायत छन् । साथै बिभिन्न कार्यक्रमका लागि आएका तर कोरोनाका कारण कार्यक्रम हुन नसकेका र अफ्ठ्यारोमा परेका कतिपयलाई स्थानीय संघ संस्था र समाजसेवीहरुले चन्दा उठाएर समेत पठाएका थिए।
बुधबार ग्याटविक विमानस्थलमा विदाई गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी उपनियोग प्रमुख आरन सहित कन्सुलर सेवा का सबै कर्मचारीका साथ उपस्थित थिए। कतिपय नेपाली हरुलाई आबश्यक कागजात र सेवा समेत विमानस्थलमा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ युकेकी अध्यक्ष पूनम गुरुङ र निबर्तमान उपाध्यक्ष शेर बहादुर सुनारका साथै पत्रकार र आफन्तहरु समेत विमानस्थल पुगेका थिए।
कोरोना टेस्ट र सामाजिक दुरी !
बेलायत सरकारको हालको २ मिटरको सामाजिक दुरीको भने कतिपयले बेवास्ता गरेको विमानस्थलमा उपस्थित कतिपयले गुनासो गरेका छन्। बेलायतमा जुलाई ४ देखि मात्र २ मिटरको सामाजिक दुरी लाइ सम्भब नभएमा १ मिटर प्लस सम्म गर्न सक्ने बताइएको छ। यसघि पनि बेलायतमा कोरोना महामारीको शुरुवाती समय फेब्रुअरी अन्तिम साता देखि मार्च महिनामा लकडाउन शुरु नहुन्जेलसम्म पनि कतिपय संस्था र समुदायले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरिएको प्रति आलोचना हुदै आएको छ। नेपालीहरुको संक्रमित संख्या र मृत्युदर पनि बेलायतमा सबैभन्दा बढी छ।
त्यसैगरी उडान गर्नु पूर्व कोरोना भए नभएको चेकजाँच (टेस्ट) गराउनु पर्ने स्वास्थ्य निर्देशिकालाई समेत दुताबासले परिमार्जन गरि टेस्ट नगरी नेपाल उडेका थिए। गैरकानूनी रुपमा बेलायत बसिरहेका १५ जनाले यहाँ स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दा अध्यागमन र प्रहरीले समात्ने सम्भावना भएकाले विना स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल जान पाउनु पर्याे भनेर दुताबासमा आग्रह र अनुरोध गरेकोले त्यसो गरेको बताइएको छ।
(सबै तस्वीरहरु: शिव भण्डारी)